Metrosideros excelsa, वा न्यूजील्याण्ड क्रिसमस ट्री बारे सबै | सबै रूखहरू
मोनिका सान्चेज | 27/04/2022 13:42 | सजावटी रूखहरू, फिचस, सजावटी सदाबहार
El मेट्रोसाइडेरोस एक्सेल्सा यो धेरै ठूलो बन्न सक्ने रूख हो।, र त्यो पनि एक शानदार फूल छ। यो ठूला बगैंचाहरूमा पृथक नमूनाको रूपमा राख्नको लागि एक आदर्श बोट हो, किनकि यो यसको हाँगा र पातहरू द्वारा प्रदान गरिएको सुखद छायाको आनन्द लिने उत्कृष्ट तरिका हो।
यसको विकास दर मध्यम प्रकारको छ; यसको मतलब यो बस्ने अवस्थाको आधारमा प्रति वर्ष औसत २० देखि ३० सेन्टिमिटर बढ्छ। साथै, यदि तपाइँ प्रत्यक्ष सूर्यको प्रतिरोध गर्ने रूख खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो विचार गर्नको लागि एक प्रजाति हो, त्यसोभए यदि यो मामला हो भने, म तपाईंलाई यस बारे जान्न आवश्यक सबै कुरा बताउनेछु।
1 Metrosideros excelsa को उत्पत्ति र विशेषताहरू
3 Metrosideros excelsa लाई कस्तो हेरचाह चाहिन्छ?
उत्पत्ति र को विशेषताहरु मेट्रोसाइडेरोस एक्सेल्सा
यो न्यूजील्याण्डको लागि सदाबहार रूख हो, जहाँ यसलाई पोहुतुकावा भनिन्छ; यद्यपि यसलाई अन्यत्र न्यूजील्याण्ड क्रिसमस ट्री पनि भनिन्छ। यो 20 मिटरको उचाइमा बढ्छ, र 8-10 मिटरको चौडा मुकुट विकास गर्दछ।। केहि परिस्थितिहरूमा, यो चट्टानमा बढ्दा हुन्छ जस्तै, जमिनमा यसको एंकोरेज सुधार गर्न हवाई जराहरू विकास गर्न सक्षम छ।
फूलहरू रातो, पहेंलो वा गुलाबी हुन्छन् विविधता र/वा खेतीमा निर्भर गर्दछ, जस्तै 'Aurea' जसले तिनीहरूलाई पहेंलो उत्पादन गर्दछ। यो गर्मीमा, विशेष गरी, दक्षिणी गोलार्धमा डिसेम्बर र फेब्रुअरीको बीचमा, र उत्तरी गोलार्धमा जुन र सेप्टेम्बरको बीचमा फूल्छ।
न्यूजील्याण्ड क्रिसमस ट्री सजावटी बोटको रूपमा मात्र प्रयोग। एकान्त नमूनाको रूपमा रोपिएको यो धेरै राम्रो देखिन्छ, विशेष गरी जब यो फूल्छ। यद्यपि, यसको उत्पत्ति स्थानमा यसलाई अष्ट्रेलियाली पोसम वा पोसमद्वारा धम्की दिइन्छ। यो देशमा पेश गरिएको थियो र यस रूखको पातहरू चकित पार्ने आनन्द लिन्छ, त्यसैले परियोजना क्रिमसन, जसको उद्देश्य M. excelsa र अन्य देशी रूखहरू दुवैको रक्षा गर्नु हो।
के ख्याल गर्छ मेट्रोसाइडेरोस एक्सेल्सा?
यदि तपाइँ एउटा चाहानुहुन्छ भने, तपाइँलाई यसको आधारभूत आवश्यकताहरू के हो भनेर पहिले नै थाहा हुनु महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले तपाइँलाई यसलाई कहाँ राख्ने छनोट गर्न सजिलो बनाउँदछ र तपाइँले के मर्मत कार्यहरू गर्नु पर्छ ताकि यो राम्रो होस्:
छवि - विकिमेडिया / क्रिजिस्टोफ जिआर्नेक, केनराइज
यो एउटा रूख हो यो पाइप र नरम भुइँहरू भएको ठाउँबाट सम्भव भएसम्म प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाशमा परेको ठाउँमा हुनुपर्छ। अन्यथा यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ। वास्तवमा, यसलाई भाँच्न वा क्षति पुर्‍याउने कुनै पनि चीजबाट कम्तिमा दश मिटर टाढा रोप्नु उत्तम हुन्छ।
त्यस्तै गरी, यसलाई अन्य ठूला बिरुवाहरूबाट कम्तीमा ५ मिटर टाढा राख्न पनि सिफारिस गरिन्छ, त्यो अन्य रूखहरू वा ताडका रूखहरू होस्। यसरी, यसले राम्रो विकास हासिल गर्नेछ।
यो धेरै माग गरिएको होइन, तर जैविक पदार्थ र प्रकाश मा धनी माटो मा तरकारी सबै भन्दा राम्रो। त्यस्तै गरी, यसलाई सकेसम्म चाँडो बगैंचामा रोप्न सिफारिस गरिन्छ; यसरी, यो राम्रो गतिमा बढ्छ र यो भन्दा बलियो हुन्छ यदि यसलाई लामो समयको लागि भाँडामा राखिएको थियो।
अब, यदि यो जवान र/वा बिरुवाको नमूना हो भने, यसलाई विश्वव्यापी सब्सट्रेटले भरिएको ड्रेनेज प्वालहरू भएको कन्टेनरमा राख्न सकिन्छ, जस्तै प्रसिद्ध ब्रान्डहरू। फूल.
सामान्यतया, गर्मीको समयमा तपाईले जाडोको समयमा भन्दा धेरै पटक पानी दिनु पर्छ, किनकि बिरुवा बढ्दै गर्दा बढी पानी चाहिन्छ। तर बाँकी वर्ष, तापक्रम कम हुने र सामान्यतया वर्षा हुने भएकाले हामी कम पानी दिन्छौं। तर, तपाईले कति पटक यो गर्नु पर्छ?
यो क्षेत्रको मौसममा निर्भर हुनेछ: जति उच्च तापक्रम र कम वर्षा हुन्छ, त्यति नै पानी आवश्यक हुन्छ।। यद्यपि, के गर्न सकिँदैन, माटोलाई सधैं ओसिलो राख्नु हो, किनकि यो जलीय बिरुवा होइन र यसलाई जस्तै व्यवहार गर्नु हुँदैन, किनकि यसले पानी जम्ने प्रतिरोध गर्दैन।
शंकाको अवस्थामा, हामी काठको छडी घुसाउन सिफारिस गर्छौं। यदि तपाईंले यसलाई बाहिर निकाल्दा धेरै माटोको साथ बाहिर निस्कन्छ भने, यसको मतलब यो धेरै भिजेको छ र त्यसैले, यसलाई पानी हाल्नु हुँदैन।
यो तिर्न अत्यधिक सल्लाह छ मेट्रोसाइडेरोस एक्सेल्सा यसको बढ्दो मौसममा, अर्थात् वसन्तदेखि गर्मीको अन्त्यसम्म, वा शरद ऋतु सम्म पनि यदि मौसम न्यानो छ र त्यहाँ कुनै फ्रस्ट छैन वा तिनीहरू धेरै कमजोर छन्। यो गर्नका लागि, तपाइँ शाकाहारी जनावरहरूबाट मल लागू गर्न सक्नुहुन्छ, गुनो, मल्च, वा कम्पोस्ट।
यसलाई रासायनिक मलसँग पनि निषेचित गर्न सकिन्छ, जस्तै सार्वभौमिक किन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ वा फूल फुल्ने बिरुवाहरूको लागि, सधैं प्रयोगको लागि निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
यसलाई गुणन गर्न सम्भव छ बीज, जुन वसन्तमा रोप्नु पर्छ; र द्वारा काटिएको जाडो वा वसन्तको अन्त्यमा।
त्यो रुख हो उसलाई चिसो मन पर्दैन; यद्यपि, यसले कमजोर र कहिलेकाहीं फ्रस्टलाई -2ºC सम्मको प्रतिरोध गर्न सक्छ, सायद -3ºC यदि यो हावाबाट सुरक्षित छ भने।
तपाईले के सोच्नु भयो मेट्रोसाइडेरोस एक्सेल्सा?
लेखको पूर्ण मार्ग: सबै रूखहरू » फिचस » पोहुतुकावा (Metrosideros excelsa)